VOIN-KAVA MAHATRATRA : Nahatsiaro ireo traboina tetsy Anosipatrana ireo mpanolotsaina mpanohitra | NewsMada
VOIN-KAVA MAHATRATRA : Nahatsiaro ireo traboina tetsy Anosipatrana ireo mpanolotsaina mpanohitra
Ireo mpanolontsaina mpanohitra nanome fanampiana tetsy Anosipatrana.
Nanatanteraka fizarana fanampiana ho an’ireo traboina ireo mpanolontsaina mpanohitra eo anivon’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo ny sabotsy teo tetsy Anosipatrana. Ireto traboina notolorana fanampiana ireto izay toa tsy hitan’ny fanjakana. Hatreto mantsy, mbola tsy nisy solotenan’ny fanjakana nandalo teny an-toerana afa-tsy ireto mpanolon-tsaina mpanohitra eo anivon’ny CUA ireto…
Tsy nijery fotsiny fa nanao voin-kava mahatratra niaraka tamin’ireo fokonolona traboina tetsy Ampangabe Anosipatrana noho ny fandalovan’ilay rivo-doza Enawo ny mpanolon-tsaina mpanohitra teo anivon’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo izay nahitana an-dRakotondrazafy Lalatiana, Ravololomanana Lalatiana, Rajerison Véronique sy ireo namany hafa. Vary sy voamaina no voatsirambin’ny tànana nentin’izy ireo ho an’ireto traboina ireto. Namafisin’ireto mpanolon-tsaina mpanohitra ireto fa kely ihany no afaka nataon’izy ireo satria anjara andraikitry ny fanjakana ny fanampiana ny traboina tahaka izao. Araka ny fantatra, ireo traboina tetsy amin’ny ANS Ampefiloha ihany no vao nojeren’ny mpitondra fanjakana amin’izao fotoana izao ary nataon’izy ireo ankilabao kosa ny sasany.
« Vao izao izahay vao nisy nahatsiaro tahaka izao. Izahay anefa tsy lavitra fa eto Anosipatrana saingy tsy hitan’ny fanjakana. Fianakaviana 71 izahay no traboina eto saingy tsy fantatry ny fanjakana foibe akory izany », hoy ny nambaran’ny solotenan’ireo fokonolona teny an-toerana.
Ho an’ny Ben’ny tànanan’Antananarivo manokana dia tsy eto ny tenany amin’izao fotoana izao fa lasa namonjy hetsika mikasika ny horonan-tsarimihetsika any Copenhague. Mampametra-panontaniana araka izany ny momba ny laharam-pahamehana ho an’ity ben’ny tanànan’Antananarivo ity na ireo traboina na ny dia mandeha mankany ivelany. Izay toa tsy hafa fa mitovy amin’ny an’ny minisitry ny mponina izay nandeha nankany Etazonia ary namela irery ireo traboina teto Madagasikara.
« Izahay no manam-pahefana voalohany tonga teto hoy ianareo teo saingy izay mihitsy no antony. Tsy afaka hampanantena anareo izahay anefa tsy ho tanterahina akory izany avy eo. Entinay any amin’ny Ben’ny tànana izany hetahetanareo izany dia hita eo izy na hamaly na tsia. Raha ny hita hatramin’izay dia tsy mamaly izy », hoy ny nambaran-dRavololomanana Lalatiana, isan’ny mpanolon-tsaina mpanohitra.
Noporofoin’ireto mpanolon-tsaina mpanohitra ireto araka izany fa tsy manadino ireo vahoaka izy fa mijoro eo anilan’izy ireo hatrany indrindra tamin’ireny voina nahazo azy ireo vokatry ny fandalovan’ny rivo-doza ireny.